Victoria House Resort & Spa, Belize waxay soo bandhigaysaa Madadaalo & Degganaansho Cusub Qorraxda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Victoria House Resort & Spa, Belize waxay soo bandhigaysaa Madadaalo & Degganaansho Cusub Qorraxda
Belize Breaking News • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • jiga • Dalxiiska • Qiimaha Safarka | Talooyinka Safarka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Muuqaalka balli ee Victoria House Resort & Spa, Belize
Guriga Victoria House Resort & Spa ee jasiiradda abaalmarinta ku guuleystay ee xeebta Belize waxay martida siisaa adeegyo kala duwan oo raaxo leh si ay u helaan safar xusuus leh.
Goobta dalxiiska ayaa ku dhawaaqday laba hadiyado oo marti ah oo cusub-Baxsashada yar yar iyo baakadaha farxadda leh si loo dhiirrigeliyo nasashada ugu badan ama xiisaha-raadinta.
Victoria House waa deegaan xasilloon oo ay martidu ku raaxeysan karaan nasashada guud iyo sidoo kale marti -gelinno xiiso badan.
Guryo raaxo leh, adeegyo heer caalami ah, iyo adeeg nimco leh ayaa ah waxa martidu ka heli doonto fasaxooda ugu fiican.
Victoria House Resort & Spa, Belize, hanti aad u qurux badan oo raaxo leh oo ku taal jasiiradda Ambergris Caye ee Belize, waxay ku faraxsan tahay inay markii ugu horreysay soo bandhigto laba dalab oo marti ah oo cusub-Baxsashada Petite iyo Baakadaha Nacasnimada leh si loo dhiirrigeliyo nasashada ugu badan ama xiisaha-raadinta. Martida hantida oceanside waxay ku raaxaysan karaan 3-ilaa-7-habeen oo baxsad ah oo loo habeeyay si ay u bixiyaan jaceyl, nasasho, madadaalo, iyo quudhin. Iyada oo leh hoyyo raaxo leh, adeegyo heer caalami ah, iyo adeeg naxariis leh, Victoria House Resort & Spa ayaa ah goobta ugu habboon ee dib loogula xiriiri karo kuwa aad jeceshahay oo xusuus lagu sameeyo.
“Victoria House waa deegaan xasilloon oo ay martidu ku raaxaysan karaan nasasho guud iyo sidoo kale marti -gelin xiiso badan,” ayay tiri Janet Woollam, maamulaha guud ee Victoria House Resort & Spa. Xidhmada Baxsashada Yaryar ama Xidhmada Belize ee Nasiib -darrada leh, martidu waxay haystaan ​​xulashooyin aad u fara badan waxayna ka faa'iidaysan karaan adeegyada madadaalada leh ee madadaalada iyagoo waliba fursad u haysta inay sahamiyaan jasiiradda quruxda badan oo ay la kulmaan dhaqankeeda gaarka ah xawaaraha ay ku leeyihiin golf -kooda aadka u gaarka ah gaadhigii. ”
The Xidhmada Baxsashada Yaryar waxaa ka mid ah:
• Waafajin raaxo leh midkood qolka Casita ama Palmetto
• Quraac buuxa maalin kasta
• Dhalada Prosecco marka ay timaaddo iyo soo -dhawaynta “Belizean Colada”
• Kireysiga gaariga golf -ka hal maalin (oo ay ku jiraan gaaska iyo caymiska)
The Xidhmada Bissil Bissil waxaa ka mid ah:
• Saxiix Dabeecad -ku -duugis ah Daaweyn hal saac ah oo loogu talagalay laba isbitaal (lagu qiimeeyo $ 220)
• $ 150 deyn si aad u isticmaasho dukaanka quusitaanka ee goobta
• Dhalada Prosecco iyo soo -dhawaynta “Belizean Colada”
• Hal maalin kireysiga gaariga golf -ka oo ay ku jirto gaaska
• Isticmaalka aan xadidnayn ee baaskiiladaha, kaxaynta, sabuuradaha taagga ee istaagga iyo qalabka dabaysha
• Quraac buuxda Maalin kasta
Victoria House Resort & Spa waxay caan ku tahay nasashada “jaziirada jasiiradda” iyo xarrago la’aanta caga -la’aanta oo dhan. Gurigu wuxuu leeyahay qaabilaadyo kala duwan sida Casitas kulaylaha oo aad u sarreeya, tuulooyin kaligood ah oo leh barkado gaar loo leeyahay, fiilayaal aragti badda ah, ama qolal si qurux badan loo qurxiyey oo ku yaal dhisme qaab-dhismeed laba-dabaq ah. Victoria House Resort & Spa sidoo kale waxay ku faantaa inay soo bandhigto a spa adeeg buuxa iyo xarunta jirdhiska iyo sidoo kale saddex xarumood oo cunto karis oo kala duwan munaasabad kasta.
Waxay ku yaalliin cidhifka mid ka mid ah cajaa'ibyada dabiiciga ah ee ugu yaabka badan adduunka, Belize Barrier Reef, Victoria House waxay bixisaa waxyaabo xiise leh oo kala duwan. Martidu waxay ku nasan karaan barkadaha ku raaxeysanaya goobta iyo xeebaha gaarka loo leeyahay, ama waxay ka qaybqaadan karaan dhaqdhaqaaqyada xiisaha leh sida baaskiil wadista, kaxaynta ama fuulitaanka fuulitaanka. Kooxaha waayo-aragnimada iyo ruug-caddaaga ah ee Victoria House iyo Fantasea Dive Shop oo ay PADI-shahaado siisay oo ku yaal daloolka guriga, waxay u qabanqaabin karaan waxqabadyo badan martida sida quusidda, qiiqa, kalluumaysiga, iyo godadka. Dukaanka Fantasea Dive sidoo kale wuxuu bixiyaa kirooyinka qalabka iyo shahaadooyinka.
Jasiiradda si fudud ayaa looga heli karaa iyada oo la raacayo duulimaad 15 daqiiqo ah Belize magaalada, oo kaliya 35 mayl u jirta. Sahaminta macbudyada qadiimiga ah ee Mayan-ka, oo ku dhejisan daaqadaha hawdka ah ee ay ku jiraan Daanyeero Howler Madow, ka-qaybgal safar duur-joog ah, ama safar quusitaan oo ku aaddan xeebta dhuxusha ee Dhaxalka Adduunka ayaa ah dhammaan fursadaha Ambergris Caye waxaana lagu mideyn karaa iyada oo loo marayo kooxda macmiisha. Labada baakadba waa la heli karaa hadda ilaa Diseembar 20, 2021. Faahfaahin dheeraad ah iyo sida loo dalbado ayaa noqon kara halkan ka hel.
Intaa waxaa dheer, caafimaadka iyo samaqabka martida loo dalxiis tago, dhammaan shaqaalaha ayaa si buuxda loo tababaray muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo heerarka ugu sarreeya ee hab -maamuuska fayadhowrka iyo badbaadinta iyadoo la bixinayo khibrad martida oo xirfad leh oo soo dhaweyn leh. Dalxiisku wuxuu taagay saldhigyo fayadhowr gacmeed oo ku yaal guriga dhexdiisa, wuxuu geeyay UVC Gacan -qaadayaasha Gacan -siinta si loo nadiifiyo qolalka martida, meelaha dadweynaha, iyo meelaha cuntada iyo cabitaanka, wuxuuna adeegsadaa alaabo kale oo nadiif ah oo nadiif ah oo la xaqiijiyay, sida Aqueous Ozone oo biyaha lagu nadiifiyo iyo A/B Qabow Fogging for sterilization saxda ah ee meelaha ballaaran.
Waxay ku taallaa Belize oo ku taal Ambergris Caye, oo ah tan ugu weyn Jasiiradaha Belizean ee xeebta, Victoria House waxay kaliya laba mayl koonfur ka xigtaa San Pedro Town oo qurux badan. Dalxiisku wuxuu bixiyaa dhadhan xarrago cago-cag ah oo martida ku soo celiya wax badan, oo leh 42 qol oo martida ah oo ka kooban qaab ka samaysan saqafka saqafka ah ilaa filooyinka xeebta leh oo leh barkado gaar loo leeyahay, qolal qaab-beeris ah, iyo fiilayaasha aragtida badda. Palmilla Restaurant iyo Admiral Nelson's Bar waxay caan ku yihiin cunno iyo cabitaan wanaagsan oo lagu ammaanay adeeg aan caadi ahayn oo shaqsiyeed. Feejignaanta si faahfaahsan shaqaalaha iyo maamulka si isku mid ah ayaa ugu guulaystay abaalmarino ay ka heleen warbaahinta caalamiga ah iyo abaalmarino ay ka heleen ururada sharafta leh sida Conde Nast Traveler, Conde Nast Johansens. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo halkan.